fonosana iray fonosana ho an'ny mpanamboatra mangarahara - China stabilizer iray fonosana ho an'ireo mpamatsy mangarahara sy ozinina
Vovon-tsakafo stabilizer ho an'ny fantsom-panafody malefaka fantsona fantsom-plastika PVC
Ny plastika ampidirina ao amin'ny matrix PVC dia mampitombo ny fahafaha-misafidy saika ny ambaratonga rehetra tadiavina ary manitatra betsaka ny fampiasa ho an'ny plastika vita amin'ny PVC. Ampiasaina indrindra amin'ny fantsona (sakafo, ara-pahasalamana), Hoses (tsindry, zaridaina, paompy), gasket, varavarana savily ary lalantsara. Ny Stabilizers dia manana fahamendrehana hafanana avo, fofona ambany, kalitaon'ny rivotra anaty trano tsara, mifanentana tsara amin'ny plastika.
Mpanentana maimaimpoana poizina ho an'ny takela-pirinty mazava amin'ny pirinty vita amin'ny takelaka PVC
Ankoatry ny sarimihetsika hentitra amin'ny PVC, misy ihany koa ny fampiharana marim-pototra ho an'ny horonantsary PVC malefaka miorina amin'ny CaZn Stabilizer. Ny tsena dia anjakan'ny sarimihetsika plastika, na dia mihamaro aza ny sarimihetsika malemy tsy misy plastika miditra amin'ny tsena. Ity sarimihetsika malefaka ity dia be mpampiasa amin'ny sarimihetsika lamination, sarimihetsika famonosana varavarankely, sarimihetsika mametaka tena, sarimihetsika dokambarotra, mihena ny sarimihetsika, sarimihetsika famonosana fiara, sarimihetsika pirinty, sarimihetsika famantarana, fifamoivoizana, sarimihetsika fitaovana, sarimihetsika latabatra, akanjo ambony latabatra sns. fanodinana faran'izay tsara, fahamendrehana avo lenta, lozabe avo lenta, fofona ambany, fanontana azo antoka.
Kitapom-batsy hafanana iray fonosana ho an'ny ravina plastika mihodina mafy & famonosana horonan-tsarimihetsika PVC mats
Ny sarimihetsika hentitra PVC dia ampiasaina amin'ny famonosana ny vokatra fanafody dia mety amin'ny famonosana takelaka, kapsily, tsindrona, syringes ary kojakoja fitsaboana hafa. Ary koa, ampiasaina amin'ny kilalao, gadget, fijanonana, kosmetika, fitaovana, kojakoja amin'ny sakafo, haingon-trano, fitaovam-panamboarana ary indostria isan-karazany amin'ny tanjona fanangonana. Ireo horonantsary ireo dia mamokatra indrindra avy amin'ny Ca / Zn PVC Stabilizers satria maharitra maharitra, tanjaka avo lenta, porofon'ny hamandoana, fanoherana ny ranomaso, tsy misy metaly mavesatra manimba, tsy misy phenol, afaka maimaim-poana. Ary koa, ny fonosana malemy paika dia mitarika ny fironana famonosana satria tsy hoe miaro ny vokatra fotsiny izy io fa manome fahafaha-manao ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana.
Pvc Additives, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Heat Stabilizer, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Stabilizer,